IPL Match 11 : जितको भोको हैदरावादले रोक्ला दिल्लीको जित यात्रा ? – WicketNepal
Sakar Sedhain, २०७७ आश्विन १३, मंगलवार १४:३०
युएईमा जारी १३ औं आईपिएल अन्तर्गत मंगलबार ११ औं खेलमा श्रेयस ऐयरको कप्तानिमा रहेको दिल्ली क्यापिटल्स र डेभिड वार्नरको कप्तानिमा रहेको सनराइजर्स हैदराबादबिच प्रतिस्पर्धा हुदैँछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति ७:४५ बजे आबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा खेलिनेछ।
दुबै टोलिले यसअघि समान २-२ खेल खेलिसकेका छन् जसमा दुई जित सहित दिल्ली अकंतालिकाको शिर्ष स्थानमा छ भने दुई हार बेहोरेको हैदराबाद पुछारमा छ।
लिग इतिहासमा उपाधि जित्न नसकेको दिल्ली यो सिजन शानदार सुरुवात गर्दै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। अर्कोतफ २०१६ को विजेता हैदरावाद लगातार प्लेअफमा पुगेता पनि यो सिजन खराब सुरुवात गरेको छ। खेलमा दिल्लीको विजयी यात्रा तोड्दै हैदरावाद जितको खाता खोल्ने सोचमा रहनेछ।
दिल्ली क्यापिटल्सको प्रतियोगितामा नतिजा :- दिल्लीले आफ्नो पहिलो खेलमा केएल राहुलको नेतृत्वमा रहेको किङ्ग्स-११ पन्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा चेन्नाई सुपर किङ्ग्समाथि ४४ रनको फराकिलो जित दर्ता गरेको थियो।
सनराइजर्स हैदराबादको प्रतियोगितामा नतिजा :- हैदराबाद पहिलो खेलमा बिराट कोहलीको नेतृत्वमा रहेको रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोरसंग १० रनले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्ससगँ ७ विकेटले पराजित भएको हैदराबाद प्रतियोगितामा पहिलो जितको खोजिमा छ।
अंकतालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको दिल्ली टिम सन्तुलित देखिएको छ
हेड टु हेड :- हालसम्म यी दुई टोलीबिच १५ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ जसमध्य हैदराबाद ९ खेल तथा दिल्लीले ६ खेल जितेको छ। गत सिजन दुबै खेलमा दिल्लीले हैदराबादलाई पराजित गरेको थियो। गत सिजन इलिमिनेटरमा दिल्लीले २ विकेटको जित दर्ता गर्दै हैदरावादको यात्रा समाप्त गरेको थियो।
खेल हुने मैदान :- आजको खेल आबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा हुनेछ जसमा लिगको ४ खेल भएको छ। दिल्लीले यो मैदानमा पहिलो खेल खेल्दै छ भने हैदरावादले यस अघि कोलकातासंग यही मैदानमा खेलेको थियो। यो मैदानमा मुम्बईले कोलकाता बिरुद्ध १९५ रन बनाएको थियो भने हैदरावाद कोलकातासंग १४२। तर अधिकांश खेलको कुरा गर्दा यहाँ ब्याट्सम्यानलाई रन बनाउन सहज रहेको छ।
औसत पहिलो इनिंग योगफल : १७९ (जारी प्रतियोगितामा), पहिले ब्याटिंग गर्दाको रेकर्ड : जित -१, हार-१
दिल्ली टिम कस्तो छ : लिगमा दिल्ली सबैभन्दा सन्तुलित टिम मध्येको एक टिम हो। इशान्त शर्मा र रभीचन्द्रन आश्विन नखेल्दा पनि टिमलाई बलरको चिन्ता छैन। कागीसो रबाडाले राम्रो प्रदर्शन गर्दै फास्ट बलिंग नेतृत्व गरिरहेका छन् भने ब्याटिंगमा पृथ्वी श, शिखर धवन, श्रेयस ऐयर, रिशभ पन्त लयमा छन्। मार्कस स्टोइनिस जस्ता अलराउण्डर तथा अक्षर पटेल, अमित मिश्रा जस्ता स्पिनरले टिम बलियो देखिन्छ।
हैदरावाद टिम कस्तो छ : अर्कोतर्फ हैदरावादले अहिलेसम्म आफ्नो उत्कृस्ट ११ चुन्न सकेको छैन। वार्नर र जोनी बेयरस्टोले ओपनिंग गर्दा मनिष पाण्डे ३ नम्बरमा आएका छन्। माथि ब्याटिंग गर्ने प्रियम गर्ग त्यसैले मध्यक्रममा झर्न बाध्य छन्। कोलकाता बिरुद्ध ढाडको समस्याले विजय शंकर बाहिर भएका छन्। रिद्दिमान शाहले मौका पाए पनि उनले ३१ बलमा ३० रन बनाउदा आलोचित बन्नु परेको थियो। अर्को तर्फ भुवनेश्वर कुमार र राशिद खानले विकेट निकाल्न नसक्दा टिम चिन्तित छ। त्यसैले तेश्रो खेलमा टिममा परिवर्तन भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
दिल्लीले अघिल्लो खेलमा जितेको टिम खेलाउने सम्भावना प्रवल छ। रभीचन्द्रन आश्विन र इशान्त शर्माले अभ्यास सुरु गरिसके पनि खेल्ने सम्भावना कम रहेको छ। कप्तान ऐयरले आश्विनले अझै १-२ खेल आराम गर्ने बताएका थिए। आश्विनको स्थानमा अघिल्लो खेल खेलेका लेग स्पिनर अमित मिश्राले राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण टिममा खेलाडी परिवर्तन गर्न दबाब छैन।
लगातार २ खेलमा पराजित हैदरावादले केन विलियमसनलाई मौका दिने सम्भावना छ
हैदरावाद लगातार दोश्रो हार पछि कमजोर देखिएको ब्याटिंगमा सुधार गर्न केन विलियमसनलाई मौका दिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि उसले एक जना विदेशी खेलाडी संभवत मोहम्मद नाबीलाई बाहिर राख्नुपर्नेछ। विदेशी खेलाडीको रुपमा कप्तान वार्नर, बेयरस्टो र राशिद खानको स्थान पक्का रहेको छ।
सन्दिप लामिछाने खेल्ने सम्भावना : टिमको विजयी सन्तुलन जारि रहेकोले विदेशी खेलाडी परिवर्तन गर्ने सोचमा दिल्ली छैन। मार्कस स्टोइनिस, कागीसो रबाडा, एनरिक् नोर्किया र शिमरन हेटमायर ४ खेलाडी अन्तिम-११ मा पक्का रहेकोले सन्दिप विदेशी खेलाडीको रुपमा टिममा पर्न असम्भव देखिएको छ। त्यस माथि लेग स्पिनर अमित मिश्रा र अक्षर पटेल राम्रो प्रदर्शन गरिरहंदा टिमलाई अर्को स्पिनरको आवस्यकता रहेको छैन। मिश्राको फर्म अघिल्लो खेलमा राम्रो देखिएकोले उनि लेग स्पिनरको रुपमा टिममा रहनेछन्।
दिल्लीको सम्भावित ११ : श्रेयस ऐयर ( कप्तान ) , पृथ्वी शा, रिशभ पन्त, शिखर धवन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, आवेश खान, शिमरन हेटमायर ✈️, कागीसो रबाडा ✈️, मार्कस स्टोइनिस ✈️ र एनरिक नोर्किया ✈️
हैदरावादको सम्भावित ११ : जोनी बेयरस्टो ✈️, डेभिड वार्नर ( कप्तान ) ✈️ , केन विलियमसन ✈️, मनिष पाण्डे, विजय शंखर, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, राशिद खान ✈️, भुवनेश्वर कुमार, खलिल एहमद र टि. नटराजन
हेर्न लायक ४ खेलाडी
डेभिड वार्नर :- हैदरावादका कप्तान तथा महत्वपूर्ण ओपनिंग ब्याट्सम्यान वार्नर आईपिएल इतिहासमा सर्वाधिक ३ पटक अरेन्ज क्याप जित्ने एकमात्र खेलाडी हुन्। आक्रामक अष्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यान वार्नरले जारी सिजन आफ्नो दुई खेलमा सोचे अनुरुप प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। सुरुवाती दुई खेलमा जित हात पार्न नसकेको हैदराबाद कप्तान वार्नरको प्रदर्शन मद्दतले अघि बढ्न चाहन्छ। लिग इतिहासमा वार्नरले ३३.१९ को औशतमा ४७४८ रन बनाइसकेका छन् जुन बिराट कोहली (५४३५) , सुरेश रैना (५३६८) र रोहित शर्मा (४९९८) पछिको सर्वाधिक हो।
राशिद खान :- विश्व चर्चित लेग स्पिनर राशिद खान हाल टि-२० फर्म्याटको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन्। खानले जारी सिजन २ खेलमा मात्र १ विकेट लिन सकेका छन्। लिगमा कुल ४८ खेल खेलेका राशिदले ५६ विकेट लिएका छन्। आजको खेलमा दिल्लीका ब्याट्सम्यान उनको गुग्लीबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ।
श्रेयस ऐयर :- अपराजित दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान श्रेयस ऐयर आफ्नो आक्रामक ब्याटिंगको लागि चिनिने गर्छन्। २ खेलमा ऐयर ६५ रन बनाएका छन्। सुरुवात राम्रो पाएता पनि त्यसलाई ठूलो स्कोरमा परिणत गर्न असफल रहेका ऐयर आज त्यस गल्तीलाई दोर्याउन चाहनेछैनन्। लिग करियरमा उनले १७४६ रन बनाइसकेका छन्।
कागिसो रबाडा :- दक्षिण अफ्रिकी तिव्र गतिका बलर कागिसो रबाडा जारी सिजन ५ विकेट सहित सर्वाधिक विकेटकर्ताको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्। आफ्नो सटिक योर्कर र तेज गतिको लागि चिनिने रबाडा राम्रो लयमा छन्। हालसम्म लिगमा २० खेल खेलेका रबाडाले ३५ विकेट लिएका छन्।
१) सनराइजर्स हैदरावादले आईपीएलमा गत सिजनको अन्तिम ३ खेल र यो सिजन २ खेल सहित अन्तिम ५ खेलमा हार बेहोरेको छ। लिग इतिहासमा हैदरावादको यो सबैभन्दा लामो हारको शिलशिला हो।
२) दिल्ली क्यापिटल्सका विकेटकिपर रिशभ पन्त आईपिएलमा १०० छक्का प्रहार गर्नबाट मात्र ६ छक्का टाढा छन्। हालसम्म लिगमा १९ जना ब्याट्सम्यानले १०० छक्का प्रहार गरेका छन् जसमध्ये क्रिश गेलले सर्वाधिक ३२६ छक्का प्रहार गरेका छन्।
३) सनराइजर्स हैदराबादका ब्याट्सम्यान मनिष पाण्डे आईपिएलमा ३००० रन बनाउन ७२ रन टाढा छन्। लिगमा मात्र १५ ब्याट्सम्यानले ३००० रन पुरा गरेका छन् जसमध्ये बिराट कोहलीले सर्वाधिक ५४३५ रन बनाएका छन्।
४) दिल्ली क्यापिटल्सका ओपनर शिखर धवन आईपिएलमा दिल्लीका लागि १००० रन पूरा गर्न १०४ रन टाढा छन्।
५) सनराइजर्स हैदराबादका फास्ट बलर सिधार्थ कौल आईपिएलमा ५० विकेट हात पार्नबाट मात्र १ विकेट टाढा छन्। उनले पछिल्ला २ खेलमा मौका पाएका थिएनन्।
६) कागीसो रबाडाले लिगको अन्तिम ९ खेलमा २ वा २ भन्दा बढी विकेट लिएका छन् जुन प्रतियोगताको इतिहासमै कुनै बलरको लामो शिलशिला हो। अन्तिम पटक उनि १६ खेल अघि विकेटविहिन रहेका थिए।
सुपर ओभरमा ब्याटिंगमा इशान किशनलाई किन पठाईएन ?